I-Main Street Gullane - I-Airbnb
I-Main Street Gullane
Ifulethi elithandekayo elikhanyayo lendabuko eli-2.
Izivakashi zinefulethi lonke, elingaphezulu (2nd) floor. Ukufinyelela kungesitezi sangaphakathi sendawo yokuhlala yendabuko. Lesi sakhiwo sisukela kuma-1880's sinokubukwa okumangazayo okuvulekile ngaphambili nangemuva.
Uxolo, azikho izilwane ezifuywayo ezivunyelwe.
4.98 · 154 okushiwo abanye
IGullane iyidolobhana eligcinwe kahle elizungezwe izinkundla zegalofu kanye nezinyawo ezinhle zasogwini. Ibhishi elihle eliwine umklomelo, elisekelwa izindunduma ezinkulu zesihlabathi, elitholakala kuhambo olufushane lwemizuzu eyi-10 ukusuka efulethini. UGullane uyikhaya likaMuirfield oseke yabamba i-Open Championship izikhathi eziningi. Ngaphezu kweMuirfield, iGullane iyindawo yezinye izinkundla zegalofu ezisezingeni eliphezulu edolobhaneni nasezindaweni ezizungezile.
Izivakashi zizochithwa ukuze zizikhethele ngezindawo zokudlela ezinhle ezingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. I-Chez Roux e-Muirfield, i-La Potiniere, i-Main Course kanye ne-Bonnie Badger ka-Tom Kitchin esanda kuvulwa. Qiniseka ukuthi ubhukha kusenesikhathi njengoba lezi zindawo zokudlela zidume kakhulu kubantu bendawo nabakhi bamaholide.
Umsingathi useduze ngezimo eziphuthumayo (noma imibuzo engahleliwe).